HomeNewsगुरुङ भाषाको गीत इतिहासदेखि वर्तमानसम्म
व्यक्तिविशेषले सिर्जना गरेको गुरुङ गीत ‘क्यु दे थुलेन दुख मन’ भन्ने गीत नै पहिलो गीत हो । जुन गीत २०१६ सालमा प्रकाशन गर्नुभएको रहेछ । उक्त गीत सामाजिक कुरीति, जुवातास, जाँड, रक्सी फजुल खर्च, अशिक्षाको विषयकेन्द्रित भएको देखिन्छ ।
गीतको माध्यमबाट समाजको विसंगति कुरीति हटाउन गरिएको सुधारको आवाज थियो । २०२२ सालमा दोस्रो संस्करण प्रकाशन भएको थियो । यसैलाई विस्तारित रुपमा तमु युवा साँस्कृतिक परिवारले २०५८ सालमा प्रकाशन गरेको हो । क्यु दें थुले दुःख मन वर्षा मुलारी भन्ने गीतमा डाँफे कला मन्दिर पोखराले रेकर्ड गरे बजारमा ल्याएको हो । गुरुङ गीत, संगीतमा डाँफे कला मन्दिर पोखराको पनि ठूलो योगदान रहेको छ । २०४४ सालतिर धनबहादुर गुरुङको संगीतमा स्वर्गीय प्रवीण गुरुङको स्वरमा ‘बर्खा खजे त्होबा मजे चु खबर भोविदो’ भन्ने स्वं हर्कबहादुर गुरुङको गीत डाँफे कला मन्दिरको सौजन्यमा बजारमा आएको थियो । ‘चु गहना अखेदो रिमै’ भन्ने गीत पनि डाँफे कला मन्दिरले नै रेकर्ड गराएको गीत हो । २०५० सालतिर स्व. मिनबहादुर गुरुङले डाँफे कला मन्दिरबाट “स्योम्वै रहर” नामको गीति एल्बम निर्माण गरेको थियो । यस आलावा केही गुरुङ भाषी चलचित्र र गीति भिडियो पनि निर्माण गर्नुभएको थियो । रेडियो नेपालमा रेर्कड गराएर गाएको पहिलो गुरुङ गीत स्व. युक्तबहादुर गुरुङले गाउनुभएको “आसा मारा चुरोट थुबर खोसे ङोल्स्यो” हो ।
प्रजातन्त्रको बहालीसँगै देखिएको परिवर्तनले गुरुङ गीत, संगीतको क्षेत्रमा नयाँ आयाम थपियो । २०५३ सालमा काठमाडौंबाट ‘पाते’ फिल्म सार्वजनिक भयो । रोधींको व्यानरमा प्रितमले निर्माण गरेको पाते फिल्म नै पहिलो गुरुङ फिल्म थियो । यसमा कृष्णबहादुर गुरुङको ‘खो पाते ङि रोधींर कुवारी’ बोलको गीत रहेको थियो । शब्द, संगीत र स्वर सबै कृष्णबहादुर गुरुङको रहेको उक्त गीत तमुहरुको जनजिब्रोमा झुन्डिन सफल भयो । यही क्रममा पोखराबाट ‘न्हाम्स्यो न्होरी’ नामको गुरुङ चलचित्रको निर्माण भयो । डाँफे कला मन्दिरले निर्माण गरेको उक्त चलचित्रमा ‘ङला नासा कों नुवा लिरी’, ‘चु नार्सावै सतुरई लसि’ र ‘मारा चांदी अचैदी हिरा मोती अचैदी’ गीतहरु स्व. लोकबहादुर गुरुङ र आशबहादुर गुरुङको शब्द रचनाको गीतमा धनबहादुर गुरुङको संगीत र स्वर आशबहादुर गुरुङ र विष्णु गुरुङको रहेको थियो । त्यहीबेला रेडियो नेपालबाट गुरुङ भाषामा समाचार प्रसारण हुन थाल्यो ।
२०५० सालमा गुरुङ भाषामा समाचार वाचन गर्ने पहिलो व्यक्ति गोविन्द गुरुङ थिए । निजी क्षेत्रमा थुप्रै एफएम रेडियो र टेलिभिजन स्थापना भयो । मातृभाषी गीत र चलचित्र निर्माणको क्रम बढ्दै गयो । गुरुङ भाषी गीत, संगीत पनि झाँगिदै गयो । नेपालमा अहिले अरु मातृभाषीहरु भन्दा गुरुङ मातृभाषीमा धेरै चलचित्र निर्माण भइरहेको अवस्था छ । गुरुङ समुदायको लागि यो खुसीको अवस्था हो । जस्ले गर्दा गुरुङ भाषा, संस्कृति र भेषभूषाको संरक्षण र सम्वद्र्धन हुनुका साथै थुप्रै कलाकारहरुले आफ्नो कला प्रस्तुत् गर्ने अवसर पाएको छ भने स्रष्टा र सर्जकहरुले नयाँ–नयाँ सिर्जना गर्ने अवसर पाइरहेको छ । गुरुङ भाषी गीत, संगीत मौलाउने अवस्था रहेको छ । यसरी गुरुङ भाषामा धेरै चलचित्र निर्माण हुनु, धेरै गीत र गीतको भिज्युलहरु तयार हुनुमा यस क्षेत्रमा समर्पित सबै निर्देशक निर्माता, स्रष्टा, सर्जक साधक सबैलाई धन्यवाद दिनुपर्छ । हाम्रा स्रष्टा सर्जक, साधक र शुभेच्छकहरुको कारण गुरुङ गीत, संगीतको फाँट फराकिलो हुन गएको हो । हाम्रा गीत, संगीत गुरुङ समुदायको घेराभन्दा माथि उठेर गैरगुरुङ भाषीको जनजिब्रोमा पनि झुन्डिन सफल भएको छ ।
आम युवायुवतीको मोबाइलको रिङटोन बन्न सफल भएको छ । यसरी गुरुङ समुदायले गुरुङ गीत, संगीतको सर्जक साधकहरुप्रति गर्व गर्नुपर्छ । गुरुङ गीत, संगीतको सर्जक र साधकहरुलाई साधुवाद भन्नै पर्छ । यहाँ स्व. लोकबहादुर गुरुङको नाम सम्झिनु पर्ने नाम हो । उहाँ गुरुङ गीत, संगीतको आकाशमा एउटा उज्ज्वल नक्षत्र हुनुहुन्थ्यो । जीवनपर्यन्त उहाँ गुरुङ गीत, संगीतको साधनामा लागिरहनु भयो । गुरुङ गीत, संगीतलाई नयाँ उचाई दिनुभयो । उहाँका गीतहरु सदावहार र कालजायी छन् । गुरुङ गीत, संगीतका पारखीहरु उहाँलाई एउटा कुशल सिल्पी भन्दछन् । गुरुङ गीत, संगीतमा पछिल्लोकालमा आशालाग्दा, भरोसालाग्दा धेरै स्रष्टा, सर्जक र साधकहरु उदाएका छन् । मुलुकभित्र र प्रवासमा पनि गुरुङ भाषामा चलचित्र निर्माण गर्ने, गीत लेख्ने, रेकर्ड गर्ने, भिज्युलाईज गर्ने थुप्रै कामहरु भइरहका छन् । आन्तरिक प्रतिस्पर्धा, रचनात्मक प्रतिस्पर्धा आफैंमा सुन्दर पक्ष हो । यस्ले साधक र सर्जकलाई सवल र सक्षम बनाउँछ । गुरुङ गीत, संगीतको अनुभव संगालेर नेपाली गीत, संगीत आकाशमा राम्रो पकड राख्ने हैसियत राख्न सक्छ । गुरुङ गीत, संगीत भाषा साहित्यको फाँट समृद्ध र सबल बनाउँछ । गुरुङ गीत, संगीतको इतिहासलाई हराभरा बनाउँदै यो अवस्थामा ल्याइपु¥याउन प्रथम कवि तथा गीतकार स्व. हर्कबहादुर गुरुङ, स्व. युक्त गुरुङ, स्व. लोकबहादुर गुरुङ र कृष्णबहादुर गुरुङलाई साथ सहयोग दिने अरु पनि थुप्रै स्रष्टा र सर्जकहरु छन् ।
गीत लेखनमा रोशन गुरुङ, सुवास गुरुङ, सूर्य गुरुङ, चन्द्र गुरुङ, गणेश गुरुङ, वेदबहादुर गुरुङ (श्याम), एकेन्द्र गुरुङ, कृष्णकुमार गुरुङ, मनोज गुरुङ युके, मनोज गुरुङ, खुशबहादुर गुरुङ, धनबहादुर गुरुङ, आश गुरुङ, प्रेम गुरुङ, तेजेन्द्र गुरुङ, राजु गुरुङ, दुर्गा गुरुङ, नरजङ्ग गुरुङ, शंकर गुरुङ, गोविन्द गुरुङ । संगीतमा धनबहादुर गुरुङ, तेजेन्द्र गुरुङ, रोशन गुरुङ, राजु गुरुङ, दुर्गा गुरुङ, मनोज गुरुङ, कृष्णकुमार गुरुङ, खुशबहादुर गुरुङ, गणेश गुरुङ, नरजङ्ग गुरुङ, पदमराज गुरुङ, शंकर गुरुङ र गायनमा धनबहादुर गुरुङ, मनोज गुरुङ, गोविन गुरुङ, नरजङ्ग गुरुङ, गोविन्द गुरुङ, ओम गुरुङ, गणेश गुरुङ, ज्योति गुरुङ, शान्ति गुरुङ, मालती गुरुङ, प्रिय गुरुङ, कुशुम गुरुङ, तारा गुरुङ, आरके गुरुङ, दुर्गा गुरुङ, रघुराज गुरुङ, रिमा गुरुङ, शर्मिला गुरुङ, शंकर गुरुङ, अन्जना गुरुङ, सविना गुरुङ, स्व. देबु गुरुङ, इन्द्र गुरुङ, सिर्जना गुरुङ, सरुन गुरुङ साथै थुप्रै गीतकार, संगीतकार र गायिका गायकहरुको नाम छुटेको हुन सक्छ ।
अहिले नेपाल र प्रवासमा पनि नयाँ स्रष्टा सर्जकहरुको थुप्रै गीत रेकर्ड गरेर बजारमा ल्याएको अवस्था छ । कतिपयको अभिलेख प्राप्त नभएर नाम छुट्न सक्छ । सबैको नाम उल्लेख गर्ने चाहना हुँदाहँुदै पनि छुट्न गएमा क्षमा चाहन्छु ।
साभार : एभरेष्ट टाइम्स डटनेट
दोस्रो मिसेस गुरुङ्ग नेपाल -२०७४ को प्रतिभा प्रस्फोटन सम्पन्न